Mogadishu Journal » 2021 » July » 19
Maraykanka oo go’aan ka soo saaray Soomaalida sharci darada ku joogta dalkaas
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Dowladda Maraykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa ku dhowaaqay in dadka Soomaalida ah ee sharciga aan ku lahayn Maraykanka 18 bilood lagu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inuu...
The illustrator was behind drawings of the Prophet Muhammad that sparked anger across the Muslim world. 19 Jul 2021 Danish artist Kurt Westergaard, infamous for drawing a caricature of the Prophet Muhammad which sparked outrage around the Muslim world, has died at the age of 86....
Madaxweyne Muuse Biixi oo Cafis u fidiyay Maxaabiis aad u tiro badan (Wareegto)
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summaddeedu tahay JSL/XM/WM/222-697/072021, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada Somaliland ku xidhan. Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu...
Ogeysiis: Deeqda Waxbarasho ee Hormuud usoo bandhigtay Ardayda Soomaaliyeed
Hormuud Salaam Foundation waxay ogaysiinaysaa Ardayda ka baxday Dugsiyada Sare, gaar ahaan sanad dugsiyeedka 2019/2020 & 2020 /2021 in la qaadi doono Imtixaankii lagu codsanayey Deeqda Waxbarasho ee sanadlaha ah ee shirkada Hormuud Telecom. Imtixaanka waxaa la...
Ciidamada Danab oo howlgal ku dilay dagaalyahano katirsan Al Shabaab (Sawirro)
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab gaar ahaan Ururka 5-aad, Guutada 16aad ayaa howlgal qorsheesan ay ka fuliyeen deegaano katirsan gobolka Jubada Hoose ku dilay xubno la sheegay in ay katirsan yihiin Al Shabaab. Saraakiisha ciidankan hogaamineysay ayaa Warbaahinta afka...
Kartoonistihii caanka ahaa ee u Gefey Nebigeena Muxumad CSW oo dhintay
Kartoonistihii aflagaadeeyey Nebigeena Muxumad CSW ee lagu magacaabi jirey Kurt Westergaard oo u dhashay dalka Denmark ayaa geeriyooday, kadib, markii uu in muddo ah xanuunsanaa. Wargeyska Berlingske ee ka soo baxa Caasimadda dalka Denmark ee Copenhagen ayaa qoray inay...
Madaxweyne Cagjar oo shaaciyay Sababta ay ciidamo ugu direen Gobolka Tigrey
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay sababta ciidamo katirsan maamulkooda ugu direen gobolka Tigrey si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah TPLF. Mustaf Cagjar ayaa sheegay in go’aanka ay...
Cutubyo ka tirsan Kumandoska Gorgor oo tababar loo soo xiray (Sawirro)
Cutubyo ka tirsan Guutada 9-aad ee ciidamada Kumaandoska Xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor ayaa maanta tababar loogu soo xiray xerada tababarrada ciidamada Soomaaliya ee Turkisom. Munaasabad lagu dhaariyey ciidamada soo dhameystay tababarka ay ku qaateen dugsiga tababarka...
Midowga Musharixiinta oo ka digay shan caqabadood oo heysta doorashada (Akhriso)
Midowga Musharixiinta ayaa walaac xoog leh ka muujiyay in doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonto waqtigii loo asteeyey ay ka dhacdo dalka. Arrintan ayey sabab uga dhigeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihin inaan weli la xalin khilaafaadkii taagnaa iyo ifafaaloyinka muuqda ee...
(Akhriso) DF oo amaro cusub ka soo saartay Munaasabada Ciidul adxaa
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qoraal digniin ah ka soo saartay xoolaha lagu qallo xaafadaha xilliyada lagu guda jiro waajibaadka ciidul Adxa. Wasaaradda ayaa fartay dhamaan hay’adaha samafalka khayriga ah kuwooda wadaniga ah iyo kuwa...
Ku-simaha Madaxweynaha Puntland oo Magacaabay Taliye ciidan (Akhriso)
Ku-simaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa magacaabay Taliyaha Qaybta Booliiska Gobolka Sool. Ku-simaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Markuu arkay: Dastuurka Dowladda...
Qiimaha la iibiyo xoolaha nool ee Suuqyada Muqdisho oo cirka isku shareeray (Sawirro)
Qiimaha la kala siisto xoolaha nool ee Suuqyada magaalada Muqdisho oo cirka isku shareeray, munaasabada Ciidul adxaa awgeed Qiimaha la kala siisto xoolaha nool gaar ahaan Ariga ayaa sare uga kacay Suuqyada magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey, iyadoo qiimahoodu uu kor u...